I-Bentley itshintsha ifomathi yomnyhadala wayo wonyaka-iGeofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/I-Bentley ishintsha ifom ye siganeko sayo sonyaka
I-Bentley ishintsha ifom ye siganeko sayo sonyaka
Kwiminyaka emininzi iBentley Systems ibambe isiganeko sonyaka esiquka ukunikezelwa kokugqwesa kwezinto ezintsha ekuphunyezweni kwezobuchwepheshe kwaye, ngexesha elifanayo, iindibano apho iindaba kunye neeminina zenziwa ngokusekelwe kumava kubaxumi okanye iingcali zabo. umxholo.
Iminyaka yokugqibela yatshintshile ifomathi yezifundo ezaziphethe i-Bentley Institute, eyayivuma iindibano zocweyo, ezi zaba yiminina ethathwe ngokuthanda.
Ngonyaka odlulileyo uBentley wenza ukuqaliswa kwenguqu yayo yeV8i, apho kuye kwaziwa ukuba yintoni eboniswe kumsitho kunye neePodcasts ezithile zamva nje. Kwaye njengoko besinokulindela sonke, inkomfa ebumnandi apho kuboniswe yonke imimangaliso yale nguqulo, ifomathi itshintshiwe kakhulu, mhlawumbi ngenxa yeengxaki zoqoqosho.
Amabhaso okugqwesa “BE BE Awards Excellence” ngoku aza kuba “ngamaBhaso aPhefumlelweyo”, endaweni yokuba abe ngoMeyi 11-14 njengoko kubhengeziwe kwiphephancwadi likaJanuwari, azakuba ngoSeptemba eCharlotte, eMantla Carolina. Usuku olunye nje, ke kuya kuba kuhle ukuba ngumboniso wepaneli yangaphandle kunye nomsitho wangokuhlwa.
Okwangoku, "iNkomfa ye-BE" iya kubizwa "Dityaniswa", endaweni yokuba ibanjwe ngaphezulu kweentsuku ezintathu, iya kubanjwa kwi-Intanethi nge-BE yoLuntu ukusukela ngoJuni ukuya ku-Novemba ka-2009. Umsitho wonyaka ophelileyo ungqinelane nesindululo esitsha Umdibaniso wewebhu, apho iibhlog zingenamsi omkhulu kodwa isithuba se iifom kwaye ngaphezu kwazo zonke wikis apho iphepha le-Askinga lafudukela khona ukuba ewe ndabhema ixesha elide kwaye ngaphambi kokuba ndiyithinte inqwelo yam ukuba ndiqaphele kuluntu lwabantu abazalelwe nge-genome esekelwe kwi-DGN.
Kungenzeka ukuba i-Bentley yenza olu tshintsho ngenxa yeengxaki zezoqoqosho e-United States ezihlangabezana nazo kwaye ezichaphazela phantse umhlaba wonke; Nangona siqinisekile ukuba abathengi bakho baya kubanga ukuba bafuna ifomathi yangaphambili kwaye kunjalo, abo beendaba baya kubuza ukuba ngaba ifuthe langaphambili lilahlekile. Olu iya kuba lutshintsho lwesibini olwenzeka eBentley emva kwentlekele, eyayisungule iphulo ngaphambili MSEBENZI kwabo bangenako ukusebenza kwaye bangathanda ukusebenzisa amalayisenisi emfundo kunye nolwazi lwabo lwe-Microstation.
Okwangoku, ndihleli ndinenjongo entle yokuzimasa ngoMeyi, kwaye ukuze ndingalahli isantya ndiyalele i-CD ekhethiweyo ukuba ijonge uhlobo lwe-V8i, ndiyathemba ukuba bazakufika malunga neeveki ezintathu; ngotshintsho ndigqibe kwelokuba ndifake eminye imigca engaqhelekanga. Apha ndikubonisa ukuthunyelwa esele kuqinisekisiwe kwii-CD ezi-5:
Iziqulatho zeCD: 1
- I-8 Cadastre V08.11.05.08i, eNinzi, isiNgesi - XNUMX
-KeWindows Descartes V8i, amaNinzi, isiNgesi-08.11.05.30
- I-Bentley GEOPAK Indawo ye-V8i, eNinzi, isiNgesi - 08.11.05.39
-Vavanyo lweVeneral GEOPAK V8i, amaNinzi, isiNgesi-08.11.05.39
- Imaphu yeVenis V8i, eNinzi, isiNgesi - 08.11.05.26
-I-MicroStation GenerativeComposition V8i, eyoPhindaphindiweyo, isiNgesi- 08.11.05.36
Iziqulatho zeCD: 2
-I-08.09.05.23 GEOPAK Bridge XM yoHlelo, olwaNinzi, isiNgesi-XNUMX
- I-8 GEOPAK ye-Civil Engineering Suite V08.11.05.39i, eNinzi, isiNgesi - XNUMX
-I-MicroStation V8 XM yoHlelo lweSoftware eyimfuneko, i-Multiple, isiNgesi - 08.09.04.01
Iziqulatho zeCD: 3
-I-MicroStation Schematics XM Edition, eneziNinzi, isiNgesi - 08.09.03.28
-I-MicroStation V8i, eNinzi, isiNgesi - 08.11.05.17
-Izinto ezifuneka kuqala kwizicelo zeDesktop yeDesktop, eziNinzi, IsiNgesi - 08.11.05.05
Iziqulatho zeCD: 4
-I-Windows GEOPAK ye-Civil Engineering Suite XM Ushicilelo, olwaNinzi, isiNgesi-08.09.06.31
-I-MicroStation V8 XM yoHlelo, olwaNinzi, isiNgesi - 08.09.04.88
Iziqulatho zeCD: 5
-I-MicroStation ye-TriForma V8 XM yoHlelo, amaNinzi, isiNgesi - 08.09.04.97
Ngoko ... siza kubona.
I-teknoloji yakho iya kuba njani kwi-50 iminyaka
Uyilo lwezityalo zelanga kunye ne-AutoCAD Civil 3D